နောက်တစ်ခါများတော့ … တော်ပါပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » နောက်တစ်ခါများတော့ … တော်ပါပြီ
နောက်တစ်ခါများတော့ … တော်ပါပြီ
Posted by နွယ်ပင် on Jul 7, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 15 comments
ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာက စောစောနိုးနေတာနဲ့ အိပ်က လူတွေအတွက်စားဖို့ မနက်စာလေးသွားဝယ်ပေးမိပါတယ် ..တစ်ခါထဲပြောမပြောချင်ဘူး အဟုတ်ကိုပဲ ၊
အရင်နေ့တွေကဆို နွယ်ပင်တို့က အလုပ်ပင်ပန်းလို့ အိပ်ယာက စောစောမနိုးဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အိမ်က ဝယ်ကျွေးတဲ့ မနက်စာကို အခန့်သင့်စား တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ မုန့်ဝယ်ထားတာတို့ မုန့်ကို ကိုယ်စားနိုင်ထာထက်ပိုဝယ်ထားလို့ ဆိုပြီးအိမ်က လူတွေကို ဂဂျီဂဂျောင်ကျနဲ့ အဲလို ဇီမ်ယူဖြစ်တာများတယ် ။
ဒီနေ့တော့ အဲလို မဟုတ်ဘဲစိတ်ကောင်းလေးဝင်နေတာနဲ့ မနက်မုန့်စာလေး သွားဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာ အိမ်ကလူတွေက တစ်ယောက်တစ်မျိုးမှာနေတာနဲ့ ဆိုင်(3) ဆိုင်လောက်ပတ်ပြီး ဝယ်နေခဲ့ရတယ်လေ ။ တစ်ယောက်က ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားစားမယ်ဆိုလို့ အရင်ဆုံးပဲပြုတ်သွားဝယ်တာ (1000) တန်မို့မအမ်းနိုင်ပါတဲ့ အကြွေ၇ှိမှ ရောင်းလို့ရမယ်တဲ့ အဲတော့လဲ အသုပ်ဆိုင်ကို ပြေးရပြန်ရော ” အသုပ်တစ်ပွဲ (300) အစ်မ ဘယ်လောက်တန်ပေးမှာလဲလို့ “မဝယ်ခင်ကတည်းက အသုပ်သည်ကမေးတော့ (1000) တန်းလေးကိုပြလိုက်တော့ အကြွေအမ်းဖို့မ၇ှိလို့ (400) ဖိုးယူပါလားတဲ့ အဲတာနဲ့ အသုပ်ဆိုင်မှာ အကြွေပြသာနာဖြေ၇ှင်းလာခဲ့တယ် နောက် နံပြားသွားဝယ်တော့ နံပြား တစ်ချပ် (150) နှစ်ချပ်ဆိုတော့ (300) ဆိုတော့ (500) တန်လေးပေးလိုက်တာ အကြွေတော့ ပြန်အမ်းပါရဲ့ ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံက တကယ်ဘုရားစု ပိုက်ဆံ အဟုတ်ပဲ ပိုက်ဆံသားကိုမရှိတော့ပဲ တိပ်တွေချည်းပြည့်နေတဲ့ ထူလပျစ်ကြီးကို ဘေးနားက အပြဲလေးကို နှစ်ဆယ်တန်နဲ့ ဖာထားသေးတယ် ပြန်လဲခိုင်းတော့ ဒါမြန်မာပြည်ဖြစ်ပိုက်ဆံစစ်စစ်ပါတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်လို့ ရွဲ့အပြောခံထိတာပဲ အဖတ်တင်တယ် ။ အဲတာနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်ဘက်ဆက်လက်ချီတက်တော့ မုန့်ဟင်းခါးအကြော်နဲ့ တစ်ပွဲကို လေးရာအကြွေပါရင်အကြွေပေးပါ အကြွေမပါရင် အကြော်တစ်ခုပိုထည့်ပေးပါအစ်မဆိုတာနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလဲ အကြော်တစ်ခုအပိုလေးနဲ့ပေါ့ ပြိးတော့မှ စောစောက မဝယ်ခဲ့တဲ့ ပဲပြုတ်သည်ဆိခြေဦးလှည့် ပဲပြုတ် (200) ဖိုးကို အကြွေပေးပြီး ခပ်တည်တည်ဝယ်လိုက်တော့ အစ်မ ပိုက်ဆံကလဲဖို့မပါဘူးလားတဲ့ အဲတာနဲ့ နံပြားဆိုင်ကပြောခဲ့သလို “ဒါမြန်မာပြည်ဖြစ်ပိုက်ဆံစစ်စစ် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ “မယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးအစ်မရေ ဝယ်သူတွေက ပြန်အမ်းရင် မယူတော့ ဒိပိုက်ဆံ အစုတ်က ကျွန်မတို့ဆီမှာပဲ အဖတ်တင်ကျန်တာလို့ပြန်ပြောခံတိပါလေရော အဲတာနဲ့ ဒါဆိုလဲ 1000 တန်အမ်းဆိုတော့ ဆူဆူအောင်အောင့်နဲ့ ပိုက်ဆံ အစုတ်ကိုယူထားလိုက်တယ်လေ ။အဲတာနဲ့ မနက်ခင်းမုန့်ဝယ်ချင်းအစိစဉ်ပြိးလို့ အိမ်ပေါ်ပြန်တက်တော့ အိမ်ကလူတွေက သိပြိလားဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးတွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေကြတယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်ရမလဲ နွယ်ပင်ပဲဟာ မနက်မုန့် သွားဝယ်ရတာ တော်တော် အဆင်ပြေတာပဲနော် မနက်ခင်းလဲ စောစောထရတော့ စိတ်ကြည်သလို မုန့်ဆိုင်တွေကို ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးရတော့ လမ်းပိုလျှောက်ဖြစ်ပြီး ဈေးသည်တွေနဲ့ စကားပြောရတော့ ဗဟုသုတ တစ်ခုတိုးတာပေါ့လို့ပြောထည့်လိုက်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာကတော့ တော်ပါပြီ မနက်ပိုင်းနောက်ဘယ်တော့မှ အိပ်ယာက စောစောမထတော့ဘူး နိုးခဲ့ရင်တောင် အိပ်ခန်းထဲက အပြင်ကိုယောင်လို့တောင်မထွက်တော့ဘူးလို့ ……
အမလေးပြောချင်တာပေါ့ စုံစုံရယ် ခုချိန်က အကြွေကိုင်နိုင်တဲ့ သူကဆရာကြိးပဲ
အဲတော့ ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားပြီ မနက်ပိုင်းမုန့်ဝယ်လို့
ပိုက်ဆံ အတန်ကြီးကိုင်တဲ့ သူက ဈေးသည်ကိုအောက်ကျို့နေရတယ်
အကြွေလေးနဲ့ သွားတဲ့ သူကတော့ ခပ်မာမာနဲ့ ပြောနိုင်အား၇ှိတာပေါ့ …
အယ် … ရန်ကုန်မှာက အဲလောက်အကြွေ ရှားပါးနေပြီပေါ့ ။
အစိုးရက ထပ်မထုတ်တော့လို့ လား ဟင် ? အကြွေတွေ ထပ်မထုတ်တော့ဘဲ အတန်ကြီးတွေကိုပဲ ထုတ်နေလို့လား
အကြွေ ရှားနေတာထက် ထပ်ပြီးကိုမထုတ်နိုင်တော့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေရယ်..။ ၅၀ တန်တစ်ရွက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင် စက္ကူဖိုးရယ် ၊ မှင်ဖိုးရယ်၊ ပုံနိုပ်ခရယ် ပေါင်းလိုက်ရင် ၅၀ တန်တစ်ရွက်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ၅၀၀လောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အတန်ကြီးတွေပဲထုတ်နေတာပါ။ ဘဏ်မှာ လဲပေးတယ်ဆိုတာလည်းအလကားပါပဲ။ အလိုက်ပေးပြီးလဲနေရတာ ။ ဒီကြားထဲ အကြွေ တွေကိုရတဲ့နေရာတွေက အလိုက်ပေးပြီးလဲနေကြ တဲ့ လူတွေကရှိနေတော့….ပိုဆိုးတာပေါ့။
အဲ့ဒါပေါ့ နွယ်ပင်ရေ … အကြွေကလည်း ရှားလွန်းတာနဲ့ခေတ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်ကုန်တာ… ။ ဈေးသည်ရော ၊စပယ်ယာရော အကြွေမရလျှင် မျက်နှာက ခုနှစ်ခေါက်ချိုး ၊ ရှစ်ခေါက်ချိုးနဲ့ … ။
ဟုတ်ပါ့ … ဟိုနေ့က Orange မှာ ဈေးသွားဝယ်တော့ အစွန်းထွက် ၅၀ ကျတယ် … သူတို့ အမ်းဖို့ ၅၅၀ မှာ ၅၀ အကြွေ မရှိလို့တဲ့ တစ်ရှုးလေးးယူပေးပါ့လားတဲ့ … မရှိမှတော့ ယူရတော့မှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား … ရတယ်လို့ပြောပြီး … သူက ၅၀၀ တန် အထုတ် မှာ ၅၀၀ တန်အကန့်ရဲ့ ဟိုဘက် ထောင့် အကန့်မှာ ၅၀ တန် အသစ်စက်စက်တွေ အများကြီးပဲ .. အဲ့ဒါနဲ့ ဟိုမှာ ၅၀ တန်လေလို့ပြောတော့ ၅၀၀ တန် အောက်ဘက်တွေ လှန်လှောရှာပြီး မရှိပါဘူး ဘယ်မှာလဲတဲ့ … ဟိုဘက်မှာလေ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလားလို့ပြောမှ ၅၀ တန်ကို ထုတ်လိုက်တယ် … ထုတ်ပြီးတော့ ဟာ တစ်ရှုးက စာရင်းသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထွက်လာလိုက်တယ် … ဟုတ်တယ် ရှိရင်လည်း အမ်းလိုက်ပါလား အိမ်မှာ တစ်ရှုးတွေပြည့်နေပြီ ဒီ တစ်ရှုး နှစ်ထုပ်ပေးပြီး ဘတ်စ်ကားလည်း စီးလို့မရဘူး … ၁၀၀ ခရီး ၂၀၀ တန်ပေးရင် စပါယ်ယာတွေကလည်း အကြွေမရှိလို့ ခဏဆိုပြီး မှတ်တိုင်သာရောက်တယ် ပြန်မအမ်းဘူး … ၁၀၀ x ၁၀ ဆို ၁၀၀၀ အပိုကုန်တယ် …. ၂၀၀ ပေးစီးချင်မှတော့ အထူးပဲစီးမှာပေါ့နော့် … စိန်ဂေဟာကလည်း ၁၀၀ မရှိလို့ ကော်ဖီထုပ်အမ်းတယ် ။ သူတို့မှာ ၂၀ အမ်းဖို့ အကြွေမရှိရင် သကြားလုံးပေးတယ် ကိုယ့်မှာ ၁၀ လောက် အကြွေမရှိရင်ကျတော့ လျော့မပေးချင်ဘူး တစ်ချို့ကောင်တာတွေက … စိတ်ပုပ်တယ်
ဈေးဝယ်ပီး ငွေရှင်းလို့အကောင်းဆုံးက City mart ပဲ ထုတ်ပိုးပေးတာလဲ စနစ်ကျတယ် (အတူထုတ်ပိုးသင့်တာနဲ့ မသင့်တာခွဲခြားပေးတယ်)
တော်ရုံအကြွေဆို မယူပဲလျှော့ပေးတယ် စိန်ဂေဟာ၊ ဂမုန်းပွင့်၊ Central, Orange,
ဝန်ဆောင်မှုလုံးဝမကောင်းဘူး ဝန်ထမ်းတွေဝယ်သူကို ဆက်ဆံပုံတော်တော်ဆိုးတယ်
မတတ်သာလို့ဝင်ဝင်ဝယ်နေရတာ တခါမှစိတ်တိုင်းမကျဘူး ……….
တော်ပြီနား ဒီတစ်ခါ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ စိတ်လေလို့ သွားပြီ ပေါ့
မနက် ဈေးဝယ်ဖို့ ဆိုရင် အနားက ဈေးသည်တွေက အကြွေ ရှိရက်နဲ့ မအမ်းဘူး။
နောက်မှ ပေးတဲ့.. အလကား မယူတတ်မှန်း သိလို့.. သူတို့ သေချာပေါက် ရမဲ့ လူ ဆိုတော့ အဲလိုပဲ.. အိမ်ပြန် အကြွေ လှည့်ရှာ.. ပြီးတော့ တယောက်စီ သွားပေးရတယ်။
ရတဲ့ အကြွေကိုကြည့်လိုက်ဦး အစုတ်ကြီး
ဟုတ်ပ အမ်းလိုက်တဲ့ပိုက်ဆံတိုင်းကလဲ အစုတ်နဲ့ အပြဲကြီးပဲ
အခုချိန် ပိုက်ဆံ အသစ်လေးတွေထုတ်ပေးရင်တောင် အတုလို့ထင်နေကြတာ
စုတ်နေတဲ့ အကြွေလေးတွေကသာ မြန်မာပြည်ကထုတ်တဲ့ ပိုက်ဆံစစ်စစ်ပါတဲ့
အစုတ်အပြဲပဲဖြစ်ဖြစ် အကြွေက တန်ဖိုးရှိတယ်နော်
အကြွေရှိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစွာ ဈေးဝယ်နိုင်၏
တို့များ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အောကွဆိုတာပေါ….။ အကြွေနဲ့ ဈေးဝယ်ရင်တောင်ဈေးသည်က ဆူအောင့်အောင့်နဲ့ မရောင်းချင်ဘူး..။ ဘယ်လိုကုန်အောင်သုံးရတယ်မှတ်လဲ..။ ဆယ်ပြားစေ့ မတ်စေ့ တူရာတူရာလေးတွေထပ် စက္ကူနဲ့ပတ်လိပ် ဒါ ဘယ်လောက်ပေါ့ ဘေးမှာ စာလေးရေးလို့ ..။ ပလပ်တစတစ် အိတ်ထဲထည့် မီးပိတ်..။ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ သုံးရတာ..။ စက္ကူလည်း စုတ်ရင်မယူဘူး..။ ဘဏ်တွေကလည်း နောက်ကျောက စက္ကူ အပြည့်ကပ်ပစ်လိုက်ပြီး မီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်ပြောတာပဲ..။ ခုတော့………. ပြောင်းပြန်……. ။ အကြွေမပေါလို့လဲ မရဘူး..။ ကျပ်တန်နဲ့ ကပ်စေးနဲ့ တစ်လုံးဝယ်ရင် ကိုးဆယ့်ငါးပြား ပြန်အမ်းရတာ……။ ခုလိုများဆိုရင်ဖြင့်……….
အခု ပုဂ္ဂလိကဘဏ် တွေမှာ အကြွေ အကန့်အသတ်မရှိလဲပေးနေပြီလို့ ဂျာနယ်မှာဖတ်ရတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ လဲမကြည့်ရသေးဘူး၊
ဈေးရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကတော့ အစိုးရဘဏ်မှာ စည်ပင်လိုင်စင်ပြရင် တစ်လတစ်ခါ လဲလို့ရတယ်။
အကြွေတွေက ဘယ်လောက် ပဲ စုတ် စုတ် သုံးကြသေးတယ်။ တစ် ထောင် တန် အပြဲ ပါ တာ ကို လက်မခံကြဘူး အတော် ဆိုးတာပဲ